25 Daqiiqadood Oo Nasasho Ah, Fannaaniin Garoonka Ka Heesta, Xayeysiisyo Lacag Laga Sameeyo Isbeddelka Lagu Samaynayo Kubadda Cagta - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha25 Daqiiqadood Oo Nasasho Ah, Fannaaniin Garoonka Ka Heesta, Xayeysiisyo Lacag Laga Sameeyo Isbeddelka Lagu Samaynayo Kubadda Cagta
25 Daqiiqadood Oo Nasasho Ah, Fannaaniin Garoonka Ka Heesta, Xayeysiisyo Lacag Laga Sameeyo Isbeddelka Lagu Samaynayo Kubadda Cagta
Sharci-sameeyeyaasha kubadda cagta ee lagu magacaabo IFAB ayaa kulan ka yeelanaysa in la kordhiyo waqtiga nasashada ee ciyaaraha kubadda cagta, gaar ahaan kulamada koobabka ah, taas oo ka dhigan sida ciyaarta ‘American Football’ ee finalkeeda ‘Super Bowl’ loo sameeyo nasiimooyin ay fannaaniin ka heesaan.
Waqtiga nasashada ee ciyaaraha ayaa lasoo jeediyey in laga dhigo 25 daqiiqadood halkii ay hore u ahaan jirtay 15 daqiiqadood.
Xidhiidhka kubadda Cagta Latin America ee CONMEBOL ayaa la rumaysan yahay inay faa’iidooyin badan ka heli doonaan isbeddelka cusub ee lagu samaynayo sharciga kubadda cagta, waxaanay lacago badan ka heli doonaan finalka Copa Libertadores oo Sabtida ay ku ballansan yihiin Palmeiras iyo Flamengo, taas oo qorshuhu yahay in waqtiga nasashada la kordhiyo.
Xidhiidhka kubadda cagta Ingiriiska ayaa isaguna u dheg taagaya arrintan, waxaanay si diirran usoo dhoweynayaan qorshahan iyagoo finalka FA Cup ee garoonka Wembley ay sannad walba ka dhigi doonaan madal dhaqaale badan ay ka helaan, isla markaana fannaaniin caan ahi ka heeshaan.
IFAB ayaa kulan yeelan doonta maalinta Khamiista, waxaana horyaalla oo laga doodayaan Shirweynaha Ganacsiga ee Sannadka, oo ay FIFA soo diyaarisay.
Ajandaha shirkan waxa ku jirta in qodobka 7 ee sharciga ciyaaraha isbeddel lagu sameeyo, isla markaana laga dhigo 25 daqiiqadood halkii ay hore uga ahayd 15 daqiiqadood.
Khamiista berri ayaynu eegi doonaa in qorshahani hirgalo oo isbeddel lagu sameeyo sharciga tobannaanka sannadood lagu soo dhaqmayay ee dhigaya in 15 daqiiqadood waqtiga nasashadu tahay.